အမှား "ပျောက်ဆုံးနေ OPERATING SYSTEM (WINDOWS7ကို)" FIX လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
အမှား "ပျောက်ဆုံးနေ operating system ကို" Windows7ကိုဆုံး
သင်တစ်ဦး "ပျောက်ဆုံးနေ operating system ကို" ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါသီအိုရီပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါဖြစ်သောအမှားအယွင်းများ, တစျခု။ သူမရဲ့အင်္ဂါရပ်ထိုကဲ့သို့သောကျရှုံးခြင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်သင်ပင်စနစ်ကို run နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပဲအရာဖြစ်တယ်။ Windows7ကိုရန်ကို PC များ၏ activation, သင်အထက်တွင်ပြဿနာကြုံတွေ့ရလျှင်ဘာလုပ်ထွက်ရှာတွေ့ကြပါစို့။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: windose7မှာအမှား "BOOTMGR ပျောက်ဆုံးနေသည်" ဖြေရှင်းရာမှာ
ဒီအမှား၏အကြောင်းရင်းမှာကွန်ပျူတာ၏ BIOS ကို windose မတှေ့နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ မက်ဆေ့ခ်ျကို "ပျောက်ဆုံးနေ operating system ကို" Russian သို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်: "အဘယ်သူမျှမ operating system ကို" ။ ဤပြဿနာကိုဟာ့ဒ်ဝဲ (ပစ္စည်းကိရိယာများပျက်ကွက်) နှင့်အစီအစဉ်သဘောသဘာဝဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ : ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများ
အဆိုပါ OS ကိုမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု;
အဆိုပါ hard drive ကိုမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု;
အဆိုပါ hard drive ကိုများနှင့်စနစ်ယူနစ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအကြားဆက်သွယ်မှုမရှိ;
မှားယွင်းနေ setting ကို BIOS ကို;
က boot စံချိန်မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု;
အဆိုပါ hard drive ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ operating system ကို၏မရှိခြင်း။
သဘာဝကျကျ, အထက်ပါအကြောင်းပြချက်များအသီးအသီးဖျက်သိမ်းရေးနည်းလမ်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်။ Next ကိုကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက်သူတို့ကိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: ဟာ့ဒ်ဝဲအမှားဖြေရှင်းရန်
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲချွတ်ယွင်းသည့်အတွက် hard drive ကိုနှင့်ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ကျိုး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်း, တကယ်တော့ထဲမှာ, hard drive ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်။
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, (ထို hard drive ကိုနှင့် Motherboard ကအပေါ်) နှစ်ဦးစလုံး connectors ဖို့ hard drive ကို၏ကွင်းဆက်၏ချိတ်ဆက်မှုကိုစစ်ဆေး, ဟာ့ဒ်ဝဲအချက်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ရှားပစ်ရန်။ ဒါ့အပြင်ပါဝါကေဘယ်လ်စစ်ဆေးပါ။ ဆက်သွယ်မှုလုံလုံလောက်လောက်သိပ်သည်းမပါရှိလျှင်ဒီအားနည်းချက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုတင်းကျပ်စွာ fit ကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုကြလျှင်, cable ကိုနှင့်ကွင်းဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့စမ်းပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှု။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ယာယီ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အတည်ပြုရန်ဖို့ hard drive ကိုရန် drive ကနေပါဝါကေဘယ်လ်ချပစ်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် hard drive ကိုအတွက်ရှိပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်အစားထိုးသို့မဟုတ်ပြင်၏ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သငျသညျသငျ့လျြောသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင် hard drive ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါကပညာရှင်များယုံကြည်စိတ်ချဖို့ သာ. ကောင်း၏။
အဆိုပါ hard disk ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာ, ဒါပေမယ့်လည်းပြဿနာ "ပျောက်ဆုံးနေ operating system ကို" ဖြစ်စေတဲ့အရာယုတ္တိအမှားအယွင်းများ, သာရှိနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုပြဿနာနှင့်အတူဆော့ဖျဝဲနည်းလမ်းများသုံးပြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော်စနစ်စတင်ပါတော်မမူကြောင်းပေးထား, သင် pre- ပြင်ဆင်. , လက်နက်ကိုင် LiveCD (LiveUSB) သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခ disc ကိုသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ချောင်းကိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်တပ်ဆင်ခ disc ကိုဒါမှမဟုတ် USB flash drive ကိုမှတဆင့် run သောအခါ, တံဆိပ်များအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်နာလန်ထူပတ်ဝန်းကျင်ကိုသွား "System Restore".
ယင်းကို select, options စာရင်းကိုအပေါ်ပြန်လည်နာလန်ထူပတ်ဝန်းကျင် start မှာ "Prompt ကိုဆင့်ဆို" နှင့်စာနယ်ဇင်း ဝင်ရောက်.
သငျသညျ LiveCD သို့မဟုတ် LiveUSB, ထို့နောက်စတင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက "Prompt ကိုဆင့်ဆို" လက်တွေ့က Windows7မှာက၎င်း၏စံ activation ကှာခွားမထားဘူး။
သင်ခန်းစာကို: windose7ရှိ "Command Prompt ကို" Run
အဆိုပါဖွင့်လှစ် interface ကို, ထို command ကိုရိုက်ထည့်ပါ:
အဆိုပါ hard drive ကိုစကင်ဖတ်ဖို့များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစတင်ပါလိမ့်မည်။ chkdsk utility ကိုယုတ္တိအမှားများကို detect ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအလိုအလျှောက်တညျ့ပါလိမ့်မည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏အမှု၌အတွက်ခြေလှမ်းများ၏အမိန့်ပြန် go နည်းလမ်း 1.
သင်ခန်းစာကို: HDD windose7မှာအမှားအယွင်းများအဘို့ကိုစစ်ဆေးခြင်း
Method ကို 3: Recovery ကို MBR
အမှား "ပျောက်ဆုံးနေ operating system ကို" ၏အကြောင်းရင်းလည်းပျက်စီးဒါမှမဟုတ် loader မှ (MBR) ၏မရှိခြင်းနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၌သင်တို့ကို MBR restore ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည်စစ်ဆင်ရေး, ယခင်တစျခုကဲ့သို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မိတ်ဆက်ဖွငျ့ဖျြောဖြစ်ပါတယ် "Prompt ကိုဆင့်ဆို".
စတင် "Prompt ကိုဆင့်ဆို" တှငျဖျောပွထားပြီလုပ်ဆောင်ချက်သူတို့အားသင်တန်းများများထဲမှ နည်းလမ်း 2။ စကားရပ် Knock
နောက်ထပ်အသုံးပြုမှု ဝင်ရောက်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး Boot တက်ကဏ္ဍအပေါ်လုပ်ပါလိမ့်မည် MBR ပြန်ပြောင်းရေးကာ။
ထိုအခါဒီ command ရိုက်ထည့်ပါ:
နောက်တဖန်တစ်စိတ်ကျရောဂါအောင် ဝင်ရောက်။ ဤအချိန်တွင်သစ်တစ်ခု Boot တက်ကဏ္ဍနေသူများကဖန်တီး။
သငျသညျယခု utility ကို Bootrec ပိတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာရေးရန်:
နှင့်အညီ, ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဝင်ရောက်.
က boot စံချိန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ အဆိုပါ PC ကို Reset နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းအဖြစ် log ကြိုးစားပါ။
သင်ခန်းစာကို: windose7အတွက် Bootloader ကို Restoring
Method ကို 4: system files ကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုပီပြင်
ကျွန်တော်အမှားများကိုဖော်ပြထားပါပြီအကြောင်းပြချက်အရေးပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစနစ်ကဖိုင်တွေရှိနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျချိုးဖောက်မှုများအထူးစာရင်းစစ်များနှင့်ထောက်လှမ်းဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ် recovery procedure ကိုလုပ်ဆောင်။ ဤအလုပ်ရပ်များအားလုံးသည်လည်းမှတဆင့်ထွက်သယ်ဆောင်နေကြ "Prompt ကိုဆင့်ဆို"သောနာလန်ထူပတ်ဝန်းကျင်တွင်တစ်ခုသို့မဟုတ် Live CD / USB မှတဆင့်စတင်ပါသင့်တယ်။
စတင်ပြီးနောက် "Prompt ကိုဆင့်ဆို" အောက်ပါပုံစံကို အသုံးပြု. command ကိုထဲမှာထည့်သွင်း:
sfc / scannow / offwindir = adres_papki_s_Vindovs
အစားထုတ်ဖော် "Adres_papki_s_Vindovs" သင်ပျက်စီးသွားသောဖိုင်များကိုစစ်ဆေးသင့်သည်ကို Windows ပါရှိသည်သော directory ကိုမှအပြည့်အဝလမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဟူသောအသုံးအနှုနျးစာနယ်ဇင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက် ဝင်ရောက်.
စိစစ်အတည်ပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစတင်ပါလိမ့်မည်။ ပကျြစီးစနစ်ကဖိုင်တွေအနေနဲ့အော်တိုထုံးစံ၌ပွနျလညျထူထောငျပါလိမ့်မည်သည့်အခါ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးပြီးနောက်ရုံ PC ကို restart ချလိုက်ပါနှင့်ခါတိုင်းအဖြစ် log ကြိုးစားပါ။
သင်ခန်းစာကို: OS ကို windose7မှာဖိုင်တွေ၏သမာဓိကိုစစ်ဆေးခြင်း
Method ကို 5: BIOS ကိုချိန်ညှိမှုများ
ကြှနျုပျတို့သညျဤသင်ခန်းစာတွင်ဖော်ပြရန်သောအမှား။ ဒါဟာအစမလျော်ကန်သော BIOS ကိုဆက်တင်များ (Setup ကို) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲဘောင်အတွက်သင့်လျော်သောအပြောင်းအလဲလုပ်ရပေမည်။
သင်တစ်ဦး Beep စကားကိုနားထောငျပွီးနောကျ BIOS ကိုအတွင်းသို့ဝင်နိုင်ဖို့အတွက်သင်ကီးဘုတ်ပေါ်မှာတချို့ key ကိုဖိထားပြီး, ချက်ချင်းကို PC ပေါ်မှာလှည့်အပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ကသော့ချက် F2, del သို့မဟုတ် F10။ ဒါပေမယ့် BIOS ကို၏ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. လည်းရှိနိုင်ပါသည် F1 ကို, F3, F12, Esc သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ် Ctrl + Alt + Ins သို့မဟုတ် Ctrl + Alt + Esc။ သင်သည်သင်၏ PC ကိုဖွင့်တဲ့အခါသင်နှိပ်ဖို့လိုအပ်ခလုတ်ကိုများသောအားဖြင့်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ပြသသောအမူအရာကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။
laptops မကြာခဏ BIOS ကိုသှားဖို့အမှုအပေါ်သီးခြား button ကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဤသည် BIOS ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ စစ်ဆင်ရေး၏တစ်ဦးကထပ်မံ algorithm ကိုစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းများနှင့်မူကွဲတွေအများကြီးပေါ် မူတည်. အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့်, အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်မပေးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်၏ယေဘုယျအစီအစဉ်ကိုညွှန်ပြရန်။ သငျသညျ်ပြီး boot order ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်, BIOS ၏အပိုင်း, သှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အများစုမှာဤအပိုင်း၏ BIOS ကိုဗားရှင်းဟုခေါ်သည် "Boot ကို"။ ထို့နောက်သင် Boot တက်နိုင်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံး boot လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရာမှ device ကိုရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ထိုအခါ BIOS ကို exit ။ ဒီအလုပျကိုအဓိကအပိုင်းကိုသွား, ပြီးတော့နှိပ်ဖို့ F10။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးမသင့်လျော် setting ကို BIOS ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လျှင်ပျောက်ကွယ်သွားသင့် PC ကို Restart လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကျနော်တို့ကအမှားလေ့လာနေရသည်။
Method ကို 6: ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပြန်လည် install ပြုလုပ်
ဤအမှုနည်းလမ်းများအဘယ်သူအားမျှထိုပြဿနာကိုမကူညီခဲ့ဘူး fix ဆိုပါကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး operating system ကိုတကယ်သင်ကွန်ပျူတာ start ဖို့ကြိုးစားရာကနေ hard drive ဒါမှမဟုတ်မီဒီယာအပေါ်မဟုတ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်။ ဤသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည်ဖြစ်ကောင်း OS ကိုကမကြီးနှင့်ပုံစံကိရိယာကြောင့်ဥပမာအဘို့, ဖယ်ရှားခဲ့ကြပေမည်ဘူး။
သင် operation system တစ်ခု backup လုပ်ထားရှိပါကဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်တို့ကိုသူမ၏ပြန်လည်နာလန်ထူပါစေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောမိတ္တူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းကိုကြိုတင်စောင့်ရှောက်မှုယူမထားဘူးဆိုရင် "ခြစ်ရာကနေ" တဲ့စနစ်တပ်ဆင်လုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
သင်ခန်းစာကို: OS ကို7windose Restoring
windose7"BOOTMGR ပျောက်ဆုံးနေသည်" ပြသစတင်ရန်ကွန်ပျူတာများအတွက်အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဒီအမှားဖြစ်ပေါ်စေသောအချက်များပေါ်တွင် မူတည်. ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတွေရှိသည်။ အများဆုံးအစွန်းရောက် option ကိုအရေးယူလုံးဝ operating system ကိုနှင့် hard drive ကို၏အစားထိုး reinstall ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: Shwe Htoo,Shwe Hmone Yati New Song 2018 December (စက်တင်ဘာလ 2019).